We Fight We Win. -- " More than Media ": ပြည်ပကမီဒီယာတွေနဲ့ မပြောဘူး.........မပြောဘူး....လုံးဝမပြောဘူး။ ကာတွန်း-ဟာဂျူလီ ကသာ
ပြည်ပကမီဒီယာတွေနဲ့ မပြောဘူး.........မပြောဘူး....လုံးဝမပြောဘူး။ ကာတွန်း-ဟာဂျူလီ ကသာ
မီဒီယာသမားချင်းမို့ အားပေးဖို့ရေးထားတဲ့ကာတွန်းပါ၊ကာတွန်းလည်းရေးပြီးရော အင်တာဗျူးဆရာက တောင်တောင်အီအီတွေလျှောက်ပြောရော၊ဒါနဲ့ မတင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကာတွန်းလေးကို နှမြောလို့ ပြန်တင်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်..
ပြည်ပကမီဒီယာတွေနဲ့ မပြောဘူး.........မပြောဘူး....လုံးဝမပြောဘူး။ "ကာတွန်း-ဟာဂျူလီကသာ" ပြောတာ၊ ငါမပြောဘူး။
ကာတွန်း-ဟာဂျူလီ "ကသာ" လို့ရေးပါဗျာ။
"ကသာ" ဆိုတာ မြို့နံမည်။
ဓါးမ ပဲကွတ် တံစဉ်း ယူလာပါ။ ဆိုတာ ငယ်ငယ်က မသင်ဖူး မဖတ်ဖူးဘူး ထင်တယ်။
Ne Win, Than Shwe and Khin Nyunt-same group. They are magicians, not politicians. Always how to make magic tricks to lie their people in5decades their regimes. Big Liars.